MB 2017 Oktobra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Tamin'ny 20 septambra dia nankalaza ny taom-baovao ny jiosy, festival misy dikany maro. Ka mankalaza ny fiandohan'ny tsingerin-taona ny olona iray, mankalaza ny famoronana an'i Adama sy Eva ary mahatsiaro ny famoronana an'izao rehetra izao koa, izay misy ny fiandohan'ny fotoana. Rehefa namaky momba ny fotoana aho dia tadidiko fa ny fotoana koa dia misy dikany maro. Ny iray amin'izy ireo dia ny fotoana dia fananana mitovy amin'ny an'arivony tapitrisa sy mpangataka. Manana 86.400 segondra isan'andro isika rehetra. Fa satria tsy afaka mitahiry izany isika (tsy azo ahemotra na hahemotra ny fotoana), dia mipetraka ny fanontaniana: "Ahoana no hampiasantsika ny fotoana misy antsika?"
Ny lanjan'ny fotoana
Fantatr’i Paoly ny hasarobidin’ny fotoana ka nampirisika ny Kristianina mba “hanararaotra ny fotoana” (Efes. 5,16). Alohan'ny handinihantsika akaiky ny dikan'ity andininy ity dia tiako ny hizara aminareo tononkalo iray milazalaza ny lanjan'ny fotoana:
Miankina ny lanjan'ny fotoana
Mba hahitana ny sandan'ny herintaona dia anontanio ny mpianatra iray izay tsy nahavita fanadinana farany.
Mba hahalalana ny lanjan'ny iray volana, dia anontanio ny reny iray izay niteraka tany am-boalohany loatra.
Raha te hahalala ny lanjan'ny herinandro dia anontanio ny tonian-dahatsoratra amin'ny gazety iray isan-kerinandro.
Mba hahitana ny lanjan'ny adiny iray dia anontanio ireo tiana izay hiandry tsirairay.
Mba hahitana ny lanjan'ny minitra iray, dia anontanio ny olona iray izay tsy nahita ny fiaran-dalambany, na fiara fitateram-bahoaka na sidina.
Mba hahafantaranao ny lanjan'ny faharoa, dia anontanio ny olona iray tsy maty tamin'ny loza.
Mba hahitana ny hasarobidin'ny millisecond, dia anontanio ny olona iray izay nahazo medaly volafotsy tamin'ny Lalao Olaimpika. Tsy miandry olona ny fotoana.
Angony ny fotoana rehetra anananao, satria sarobidy.
Mizarà azy amin'ny olona manokana ary lasa sarobidy kokoa izy io.
(Tsy fantatra ny mpanoratra)
Amin'ny fomba ahoana no amidy?
Io tononkalo io dia mitondra azy io amin’ny lafiny iray mifandraika amin’ny fotoana izay nataon’i Paoly mitovy amin’izany ao amin’ny Efesiana 5. Misy teny roa ao amin’ny Testamenta Vaovao izay nadika avy amin’ny teny grika hoe mividy. Ny iray dia agorazo, izay ilazana ny fividianana zavatra eny amin'ny tsena mahazatra (agora). Ny iray hafa dia exagorazo, izay manondro ny fividianana zavatra ivelan'izany. Mampiasa ny teny hoe exagorazo i Paoly ao amin’ny Efes. 5,15-16 ary mananatra antsika hoe: «Tandremo tsara ny fitondran-tenanareo; Aza manao adala, fa miezaha ho hendry. Araraoty ny fotoana rehetra hanaovana ny tsara amin’izao fotoan-tsarotra izao »[New Life, SMC, 2011]. Ao amin’ny fandikan-tenin’i Lotera tamin’ny 1912 dia milaza hoe “mividy fotoana”. Toa te hampirisika antsika hividy ny fotoana ivelan’ny tsena mahazatra i Paoly.
Tsy dia zatra loatra ilay teny hoe "vidio". Eo amin'ny sehatry ny asa aman-draharaha dia takatra hoe "nivarotra tsy misy dikany" na amin'ny fahatsapana fa "manaiky azy". Raha misy olona tsy afaka mandoa ny trosany dia afaka manao fifanarahana izy ireo ka manakarama ny tenany ho mpanompon'ilay olona trosa mandra-trosa trosa. Ny tolotr'izy ireo dia mety ho foanana mialoha ihany koa raha misy mandoa ny trosa eo amin'ny toerany. Raha ny mpividy iray dia novidina tamin'ny tolotra tamin'ity fomba ity, ity fomba fiasa ity dia nantsoina hoe "manosika na hanavotra".
Ny harena dia afaka manjavozavo ihany koa - araka ny fantatsika avy amin'ny tranoben-paosy ankehitriny. Amin'ny lafiny iray, i Paul dia manasa antsika hampiasa na mividy fotoana. Etsy andaniny, mifototra amin'ny teny manodidina ny torolalan'i Paoly, dia hitantsika fa tokony mpanara-dia an'i Jesosy isika. I Paoly dia milaza amintsika fa tokony hifantoka tsara amin'ilay nividy fotoana ho antsika isika. Ny toerany dia ny tsy handaniam-potoana amin'ny zavatra hafa izay manakana antsika tsy hifantoka amin'i Jesôsy sy ny asa izay nasainy hataontsika.
Ity ambany ity ny fanehoan-kevitra momba ny Efesiana 5,16 avy amin'ny Boky 1 amin'ny »Wuest's Word Studies in the Greek New Testament:
Ny "mividy" dia avy amin'ny teny grika exagorazo (ἐξαγοραζω), ary midika hoe "mividy". Amin'ny tapany afovoany ampiasaina eto dia midika hoe "mividy ho anao na ho tombontsoanao manokana." Raha lazaina ara-panoharana dia midika hoe "ampiasao ny fotoana rehetra mety hampiasana fahendrena sy masina hanaovana tsara", ka ny fahazotoana sy ny fanaovana tsara no fomba fandoavam-bola ahazoantsika fotoana "(Thayer). Ny "fotoana" dia tsy kronos (χρονος), izany hoe "fotoana toa izany", fa ny kairos (καιρος), "ny fotoana izay heverina ho vanim-potoana stratejika, vanim-potoana, ara-potoana ary tsara". Tsy tokony hiezaka ny hampiasa ny fotoana araka izay tratrany araka izay tratra, fa hanararaotra ireo fotoana mety hitranga.
Koa satria tsy azo raisina ho vidin'ny entana azo vidiana ara-bakiteny ny fotoana, dia takatsika ny tenin'i Paoly amin'ny fomba mazava, izay midika fa tokony hampiasa tsara ny toe-javatra misy antsika isika. Raha manao an'izany isika dia hanana dikany sy dikany bebe kokoa ny fotoanantsika ary "handoa vola" koa isika.
Fanomezana avy amin'Andriamanitra ny fotoana
Anisan'ny zavatra noforonin'Andriamanitra ny fotoana dia fanomezana ho antsika. Ny sasany manana bebe kokoa ary ny sasany manana kely. Noho ny fandrosoana ara-pahasalamana, ny génétique tsara, ary ny fitahian'Andriamanitra, dia maro amintsika no hiaina mihoatra ny 90 ary ny sasany aza mihoatra ny 100. Vao nandre momba ny lehilahy iray tany Indonezia maty tamin'ny faha-146 taonany isika! Tsy maninona ny fotoana omen'Andriamanitra antsika, satria Jesosy Tompon'ny fotoana. Tamin'ny alàlan'ny Fahatongavana ho nofo, ny Zanak'Andriamanitra Mandrakizay dia avy tamin'ny mandrakizay ka hatramin'ny fotoana. Noho izany, i Jesoa dia niaina fotoana namoronana fotoana hafa noho isika. Ny fotoana noforonina antsika dia voafetra amin'ny faharetany, fa ny fotoan'Andriamanitra ivelan'ny famoronana kosa tsy misy fetra. Ny fotoan'Andriamanitra dia tsy mizara ho fizarana, toy ny amintsika, amin'ny lasa, ankehitriny ary amin'ny ho avy. Ny fotoan'Andriamanitra koa dia manana kalitao hafa tanteraka - karazana fotoana izay tsy azontsika tsara. Ny azontsika atao (sy tokony) atao dia ny miaina amin'ny androntsika miaraka amin'ny fahatokiana azo antoka fa hihaona amin'ilay Mpamorona sy Mpanavotra antsika amin'ny fotoany, mandrakizay.
Aza mampiasa na mandany fotoana tsy mety
Rehefa miteny am-pitenenana momba ny fotoana isika ary miteny toy ny hoe "aza mandany andro", dia midika izany fa afaka hamoy ny fampiasana tsara ny fotoanantsika sarobidy isika. Mitranga izany rehefa mamela olona na misy maka ny fotoanantsika amin'ny zavatra tsy misy dikany isika. Asehoana am-panoharana io, ny hevitry ny tian'i Paoly holazaina amintsika: "Vidio ny fotoana". Mamporisika antsika Izy ankehitriny mba tsy hanararaotra na handany ny fotoanantsika amin'ny fomba izay mahatonga antsika tsy ho afaka hanome anjara amin'ny zava-dehibe amin'Andriamanitra sy ho antsika Kristiana.
Amin’io toe-javatra io, satria momba ny “fandaniam-potoana” no resahina, dia tsy maintsy tsaroantsika fa ny fotoanantsika dia novidina voalohany ary azo indray tamin’ny alalan’ny famelan’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny Zanany. Avy eo isika dia manohy mividy fotoana amin’ny fampiasana araka ny tokony ho izy ny fotoanantsika mba handraisana anjara amin’ny fitomboan’ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra sy amin’ny hafa. Fanomezan'Andriamanitra ho antsika io fandanian'andro io. Rehefa milaza amintsika ao amin’ny Efesianina i Paoly 5,15 Mampirisika antsika izy mba “hijery tsara ny fitondran-tenantsika, mba tsy ho tahaka ny adala, fa tahaka ny hendry”, ary mampianatra antsika izy mba hanararaotra ireo fahafahana omen’ny fotoana antsika mba hanomezam-boninahitra an’Andriamanitra.
Ny iraka ataontsika »eo anelanelan'ny fotoana»
Andriamanitra dia nanome antsika fotoana handeha amin'ny fahazavany, handray anjara amin'ny fanompoana amin'ny Fanahy Masina miaraka amin'i Jesosy amin'ny fampandrosoana ny iraka. Mba hanaovana izany dia nomena antsika ny "fotoana anelanelan'ny fotoana" tamin'ny fiavian'i Kristy voalohany sy faharoa. Ny iraka ataontsika amin'izao fotoana izao dia ny manampy ny olon-kafa amin'ny fikatsahany sy fahalalana an'Andriamanitra ary hanampy azy ireo hanana fiainana feno finoana sy fitiavana, ary koa amin'ny fahatokiana azo antoka fa Andriamanitra dia amin'ny farany ny zavaboary rehetra nividy tanteraka, izay misy fotoana koa. Mivavaka aho mba hividianantsika ao amin'ny GCI ny fotoana nomen'Andriamanitra antsika amin'ny fiainana marina sy amin'ny fitoriana ny filazantsaran'ny fampihavan'Andriamanitra ao amin'i Kristy.
Ho fankasitrahana ny fanomezana nomen'Andriamanitra ny fotoana sy ny mandrakizay,
Ampiasao ny fanomezana ho an'ny fotoanantsika